झापामा एक सय वटा सहकारी भए पुग्छ :: Sahakari Akhabar
झापामा एक सय वटा सहकारी भए पुग्छ
२०७९ बैशाख ६ गते , मंगलवार Sahakari Akhabar - +
झापा जिल्ला संघले सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन के कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
जिल्ला सहकारी संघ जिम्मेवारीको हिसावले गहन नै हो । तर स्रोत सम्पन्न नहुँदा यसलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न भने ग्राहो हुने रहेछ । ७-८ वर्ष अघि डेढ सय वटाजति संस्थाहरुको ४-५ लाख मात्र सेयर पुँजी भएको अवस्था यो संघ रहेको थियो ।
यसैगरी संस्थाहरुबाट वार्षिक ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर संघ कसरी चल्ने भन्ने दोधारको अवस्था थियो । त्यो समयमा हामीले संघलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन काम गर्यौं। हिजो संस्थाहरुको संघमा सेयर ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ५ हजार पुर्यार्यौं। यसको सुरुमा विरोध भएपनि पछि सफल भयो ।
संघको आम्दानी बढाउनका लागि सहकारी दिवसका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण संस्थाको ब्यानर संघले बनाइदिने र एक हजार ५ सय शुल्क लिने काम ग¥यौं । यसबाट डेढ दुई लाख बचत भयो ।
संस्थाहरुलाई बाध्य नबनाई उत्साहित गरेरै स्रोत संकलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्यौं। कार्यक्रमहरुमा सहभागी शुल्क, प्रायोजनलगायतका कामबाट ३-४ लाख रुपैयाँ बचत भयो । झापा कोप्स स्ट्यान्डर्ड कार्यक्रमबाट पनि संघलाई आम्दानी भएको छ ।
यो कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । २ वर्षमा एक सय संस्था आवद्ध भएका छन् । यसमा आवद्ध संस्थाहरुको समूह बनाएर महिनामा एक पटक पालै पालो छलफल गर्ने, एक अर्कोको अनुभव तथा प्रगति विवरण आदानप्रदान गर्ने गरेका छौं ।
यसबाट संस्थागत सुशासन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि पनि सहयोग भएको छ । यसैबाट सहकारी अभियानमा एकरुपता र कानुनसम्मत हुन पनि सहयोग ग¥र्यो । कारोबारमा प्रतिस्पर्धा पनि भयो, असल अभ्यासको अनुशरण भएको छ । सहकारीहरुमा कारोबार पनि बढेको छ ।
वासलातमा सेयरको एक प्रतिशत जिल्ला संघमा लगानी गर्ने र अधिकतम सिमा ३० लाख कायम गर्ने व्यवस्थाले संघको सेयर पुँजी लाखबाट करोडमा पुगेको छ ।
संस्थाहरुले महिनाको एक हजार रुपैयाँ अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था अनुसार २ सय बढि संस्थाले २ लाख एकैपटक जम्मा गर्दा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।
२ वर्षयता हामी संस्थाहरुको एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । जसको कारण ९ सय बाट ८ सय २ वटामा झरेको छ । झापा जिल्लामा एक सय वटा संस्था भए पुग्छ ।
अहिलेको रफ्तार हेर्ने हो भने पनि २—३ वर्षमा आधाउधी संस्थाहरू घट्छन् । क्रियाशिल नभएका संस्थालाई खारेजी गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं महासंघले पनि यो काम सुरु गरेको छ ।
अझैसम्म स्थानिय तहमा सहकारीको फाट छैन, नाम मात्रको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, बैंकका शाखा खोल्न १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लिएकोमा सहकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यो रकम बुझाउदा हामीले के सुविधा पाएका छौं भनेर सोध्दा उहाँहरुसँग उत्तर छैन ।
सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जान के कस्तो काम भइरहेको छ त ?
अब सदस्यहरुलाई व्यवसायमा जोड्न आवश्यक्ता । प्रारम्भिक संस्था उत्पादनमा जानुपर्छ भनेर नै संघिय कानुनै उद्देश्य अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनमुलक व्यवसायमा लैजान सकिन्छ । यसका लागि सहकारी, निजी क्षेत्र साझेदारीको मोडल पनि अगाडी बढाउनुपर्छ । घाटाको व्यवसाय मात्र सहकारीले गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको सोच देखिन्छ । त्यसैले कृषिसँगै अरु व्यवसाय पनि काम गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
उत्पादनका बढाउन सहकारीलाई दिने गरिएको अनुदानको मोडल पनि गलत छ । अहिलेको अनुदान टाढाबाढाले मात्र लिने काम भएको छ । यदि उत्पादन बढाउने हो भने उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । यसैगरी केहि कानुनी सहजत पनि आवश्यक छ ।
सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानिय तहसम्म आएपछि कस्तो प्रभाव देखिएको छ त ?
अहिलेसम्म स्थानिय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन । सहकारीमार्फत ब्यवसायीक काम गर्नका लागि स्थानिय तहले पनि सहयोग गर्ने गरी बास्कोट फण्डको व्यवस्था गर्न हामीले लविङ गर्यौंतर सुनुवाई भएन ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई हामीले बुझाउन सकेनौं कि, दम्भ धेरै भयो ! उहाँहरुको सहकारीमा चासो भएन, निर्माणतर्फ गएको छ । यसको अर्को पाटो किसानका सहकारीले कमिसन त दिन सक्दैन भन्ने पनि होला ।
हामी झापाका संस्थाहरु समुदायमा आधारित छन् भनेर दावी गछौं । कसैले अनुगमन नगरेपनि सिद्धान्तत स्वनियमनमा बसेर संचालकहरु चलेकै छन् । बरु सरकारी निकायबाट अनुगमनको नाममा पैसाको बार्गेनिङ गरेको गुनासो सुनिने गरिएको छ । यस्ता प्रवृत्तीको विरोध गर्नुपर्छ ।
संघिय व्यवस्थासँगै प्रदेश र स्थानिय तह गठन भएकाले अब जिल्ला स्तरिय संरचना आवश्यक छैन भन्ने बहस हुन थालेको छ। यसतर्फ तपाईको धारणा के छ ?
तीन तहको सहकार नै ठिक या बेठिक भन्ने बहस चलिरहेकै बेला जिल्ला संघ आवश्यक छैन भनेर खारेज गर्ने समय आइसकेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा जिल्ला संघ नहुने हो भने सहकारी अभियान कमजोर हुन्छ । किनकी जिल्ला संघहरुले जिल्लाका संस्थाहरुलाई जुन किसिमले सेवा दिएको छ त्यो काम तत्काल प्रदेशबाट पूर्ति हुन सक्दैन ।
रजिष्ट्रारको एक्लो प्रयासले सहकारीको सुधार सम्भव छैन ...
२०७९ बैशाख ६ गते , मंगलवार
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाएनौं भने सहकारी अभियान कोल्याप्स हुन्छ ...
रेसियो मिलाउन नसकेपछि प्रकृति नै परिवर्तन गरौं भन्नेमा सहकारी पुगेका छन् ...
बचत तथा ऋणलाई शुद्धिकरण नगरे सहकारी अभियान नै भड्खालोमा पर्छ ...